Myanmar Small Businesses Development: December 2012
အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၏ ယှဉ်ပြိုင်နှိုင်စွမ်းတိုးတက်အောင် ဖန်တီးပေးခြင်း CreatingaCompetitive Environment for SMEs in Transition and Developing Countries
ပြီးခဲ့သည့်လ တလလုံး အလုပ်များနေသည့်အပြင် နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်မှ ၃၁ ရက်ထိ မုံရွာသို့ အလည်ပြန်နေသဖြင့် ဆောင်းပါးအသစ်မတင်ဖြစ်ခဲ့ပါ။ မုံရွာသို့ ရောက်နေစဉ်အတွင်း ကြားသိတွေ့မြင်ခဲ့ရသလောက် ဒေသတွင်းရှိ အသေးစားစက်မှုလုပ်ငန်းများမှာ ဈေးကွက်ကျဉ်းမြောင်း လာမှု၊ နိုင်ငံခြားပစ္စည်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နှိုင်စွမ်းမရှိမှု၊ ဘဏ္ဍာရေးအကြပ်အတည်း စသည့်ပြဿနာများက လုပ်ငန်းများ ရေရှည်ရပ်တည်ရေးအတွက် ခြိမ်းခြောက်နေသည်ကို တွေ့ခဲ့ရပါသည်။ တကယ်တော့ ဤပြဿနာများကို အသွင်ကူးပြောင်းစ နိုင်ငံတိုင်းလိုလို တွေ့ကြုံခဲ့ ရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ အသွင်ကူးပြောင်းစ၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ (transition and developing countries)တွင် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (SMEs)သည် နိုင်ငံအတွင်းရှိ လုပ်ငန်းစုစုပေါင်း၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုံးကျော်ရှိသဖြင့် အလုပ်အကိုင်ဖန်တည်းမှုနှင့် ပြည်တွင်း၊ပြည်ပကုန်သွယ်မှုတို့တွင် အလွန်အရေးပါသည့် လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါသည်အတွက် အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၏ ယှဉ်ပြိုင်နှိုင်စွမ်းရှိမှုကို တိုးတက်လာအောင် ဖန်တီးပေးခြင်းသည် စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု (Economic and Social Development) နှင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျှော့ချရေး (Poverty Reduction) ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် အရေးကြီးသည့် မူဝါဒတရပ်ဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံတော်တော်များများကိုကြည့်ပါက အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူပေးရာတွင် ကျင့်သုံးသည့် အခြေခံမူဝါဒများ ပြောင်းလဲလာနေသည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။ ယခင်က အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အကာအကွယ်ပေးရမည့် လုပ်ငန်းများအဖြစ်ရှုမြင်ကာ မူဝါဒများချမှတ်လေ့ရှိပါသည်။ သို့သော် ဤမူဝါဒများက အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မလာစေဘဲ မူဝါဒချမှတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများအပေါ်တွင် မှီခိုလိုစိတ်များလာလေ့ရှိပြီး ရေရှည်တွင် လုပ်ငန်းများ၏ ယှဉ်ပြိုင်နှိုင်စွမ်း ကျဆင်းလာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ နိုင်ငံတော်တော်များများအနေဖြင့် အကာအကွယ်ပေးသည့် မူဝါဒမှ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ယှဉ်ပြိုင်နှိုင်စွမ်းတိုးတက်လာအောင် အထောက်အကူပေးနိုင်သည့် ပါတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတခု ဖန်တည်းပေးနိုင်ရန် ဦးတည်ပြီး မူဝါဒများ ချမှတ်လာကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည် (OECD, 2004)။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ယှဉ်ပြိုင်နှိုင်စွမ်းအတွက် အရေးပါသည့်အချက်တခုမှာ ဈေးကွက် လိုအပ်ချက်များကို လျှင်မြန်စွာ သုံးသပ်ပြီး ပေါ်ပေါက်လာသည့် အခွင့်အရေးကို အရယူနိုင်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၏ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း တိုးတက်လာစေရန်အတွက် အောက်ဖေါ်ပြပါအချက်များကို ထိထိရောက်ရောက် ကျင့်သုံးနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
မိမိပစ္စည်း၏ ဈေးကွက်နှင့် စားသုံးသူများ၏ လိုအပ်ချက်ကို သိရှိခြင်း၊
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိခြင်း (ဈေးကွက်လိုအပ်ချက် ပြောင်းလဲသွားပါက)၊
ကုန်ပစ္စည်း(သို့)ဝန်ဆောင်မှု အသစ်များ ဖန်တီးနိုင်မှုရှိခြင်း၊
အခြားလုပ်ငန်းများ (ကုန်ကြမ်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ချောဖြန့်ဖြူးသူ)နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း
ရေရှည်ကို မျှော်တွေးပြီး ပြင်ဆင်ထားနိုင်ခြင်း။
အထက်ဖေါ်ပြပါ အချက်များ၊ အထူးသဖြင့် ရေရှည်ကို မျှော်တွေးပြီး ပြင်ဆင်ထားနိုင်ရန်အတွက် စားသုံးသူများ၏ လိုအပ်ချက် နှင့် ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာအသစ်များနှင့် ပါတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို လွယ်ကူသက်သာစွာရရှိနိုင်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစံနစ်သစ်များနှင့် လုပ်သားများစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ရန် သင်တန်းများ၊ ထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းများ၏ စံချိန်စံညွှန်းကို အာမခံပေးမည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစံနစ်များကို မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်သည့် ငွေအရင်းအနှီး ရရှိနိုင်မှုတို့ လိုအပ်ပါသည် (Wignaraja, 2003 quoted in OECD, 2004)။
မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ အသွင်ကူးပြောင်းစ၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ကျင့်သုံးနေကြသည့် နည်းလမ်းတခုမှာ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ယှဉ်ပြိုင်နှိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ရာတွင် လိုအပ်သော စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုနည်းစံနစ်နှင့်ဗျူဟာများကို လေ့လာသင်ယူနိုင်ရန် ကူညီပေးသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပေးသည့်ဝန်ဆောင်မှုများ (Business Development Services) ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် အသေးစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လိုအပ်သည့် သင်တန်းများစီစဉ်ပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်း တိုးတက်မှုအတွက် အကြံဥာဏ်ပေးခြင်း၊ ဈေးကွက်ရှာဖွေရာတွင် အထောက်အကူပေးခြင်း၊ လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ ရှာဖွေပေးခြင်း၊ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်နည်းပညာအသစ်များ လွှဲပြောင်းယူရာတွင် အကူအညီပေးခြင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ သက်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်စပ်ပေးခြင်း စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ယှဉ်ပြိုင်နှိုင်စွမ်းတိုးတက်လာရေး အတွက် အခြားလိုအပ်ချက်တခုမှာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးရေးဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးပွင့်လင်းလာမှု (globalisation and trade libralisation)နှင့် အတူပါလာမည့်ယှဉ်ပြိုင်မှုဖိအားများကို အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့်
တုန့်ပြန်နိုင်မှုစွမ်းရည်မှာ အဆိုပါလုပ်ငန်းများတည်ရှိရာနိုင်ငံအတွင်းမှ ရရှိနိုင်သည့်ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့်အတန်းပေါ်တွင် မူတည်နေသည်ဟုဆိုပါသည်။ အသွင်ကူးပြောင်းစ၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည့် ပြဿနာတခုမှာ နိုင်ငံ၏ ပညာရေးစံနစ်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ယှဉ်ပြိုင်နှိုင်စွမ်းတိုးတက်လာရေးအတွက် လိုအပ်သည့်
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ အကြား ဆက်စပ်မှုမရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အထက်တွင်ဖေါ်ပြ ထားသကဲ့သို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လိုအပ်သည့် သင်တန်းများစီစဉ်ပေးခြင်းက ပုံမှန်ပညာရေးစံနစ်ကို အစားမထိုးနိုင်သော်လည်း ပညာရေးစံနစ်နှင့် လုပ်သားထုကျွမ်းကျင်မှုကို ဆက်စပ်ပေးစေနိုင်ပါသည်။
ဒေသတွင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်သည့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မည်သို့အထောက်အကူပေးနေသည်ကို အောက်တွင်ဖေါ်ပြထားပါသည်။
ပုံပြဇယားဇစ်မြစ်။ Tas (2002)
သို့ဖြစ်ပါ၍ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ယှဉ်ပြိုင်နှိုင်စွမ်းတိုးတက်လာရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည့် ့မူဝါဒများချမှတ်ရာတွင်လည်း တစ်ဦး၊တစ်ဖွဲ့တည်း ဆောင်ရွက်၍ မရဘဲ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက် လိုအပ်သည့် နည်းပညာ အထောက်အကူပေးနိုင်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
OECD (2004) Promoting Entrepreneurship and Innovative SMEs inaGlobal Economy: TowardsaMore Responsible and Inclusive Globalisation: Available at: http://www.oecd.org/industry/smesandentrepreneurship/31919278.pdf
Tas, Nilgün (2002), “International Experience in SME Promotion”, paper presented at the Public-Private Consultation Workshop on SME Development, UNIDO-Center for Industrial Research and Development, Vientiane, 25 April.
Wignaraja, Ganeshan (2003), “Promoting SME Exports from Developing Countries” paper presented at the Regional Workshop on Trade Capacity Building and Private Sector Development in Asia, OECD and Government of Cambodia, Phnom Penh, 2-3 December.
အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၏ ယှဉ်ပြိုင်နှိုင်စွမ်းရှိမှုကို တိုးတက်လာအောင် ဖန်တီးပေးခြင်း by မြင့်မိုးချစ် is licensed underaCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Posted by Myint Moe Chit at 12/31/2012 08:30:00 pm No comments:
အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၏ ယှဉ်ပ...